06/06/2018 - Page 3 sur 4 -
Hery Vaovao ho an’i Madagasikara : Ny vahoaka no hitsara ny tsy fitovian-kevitra
Nanambara ny heviny ny avy amin’ny antoko Hery Vaovao ho an’i Madagasikara (HVM) tamin’ny alalan’ny filoha nasionaliny, Rivo Rakotovao, mahakasika ny toe-draharaham-pirenena ankehitriny. Nambarany tamin’izany àry fa firenena iraisana i Madagasikara ka filaminana ihany no …Tohiny
Famonoana “Surveillant” teny Mahamasina : Mpampianatra miisa dimy nohenoina teny amin’ny tribonaly
Notanterahina omaly teny amin’ny tribonaly Anosy ny fakana am-bavany ireo mpampianatra miisa dimy, vavolombelona tamin’ny famonoana ilay tompon’andraikitry ny lisea JJR Analakely ny tapaky ny volana mey lasa teo. Mbola tsy tapitra tanteraka noho izany …Tohiny
Fianarantsoa : Renivohitry ny friperies
Isan’ny manamarika ny tanànan’i Fianarantsoa ny friperies. Raha ny tanànan’ i Toamasina no noheverina fa fiaviany izany hatramin’izay dia fantatra ankehitriny fa any Fianarantsoa izany. Izany hoe, izy ny renivohitry ny friperies. Miainga avy any …Tohiny
Itaosy : Zazavavy 03 taona maty novonoin-dreniny
Alahelo niaro hatezerana ny an’ny fokonolona teny Antanetibe, kaominin’Ambohidrapeto Itaosy omaly raha nahita ity zazavavikely vao 03 taona monja maty novonoin-dreniny. Araka ny angom-baovao, dia nibedy io zanany io toa ny fanaony isan’andro ity renim-pianakaviana …Tohiny